Wax kasta oo aan ilaa hadda ognahay oo ku saabsan Doogee S98 | Qalabka Wararka
Wax kasta oo aan ilaa hadda ognahay oo ku saabsan Doogee S98
terminalka soo socda Taleefanka Raaxada leh saaraha Doogee waa S98, terminal kaas oo ah a boodayn la taaban karo marka loo eego jiilashii hore, ilaalinta qaar ka mid ah sifooyinkeeda soo jireenka ah sida iska caabinta shooga, kufida iyo kuwa kale.
Maqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dhammaan wararka xanta ah ee aan horeyba u qaadan karno run ahaantii ku saabsan Doogee S98, oo ah terminal hubaal ah inuu ku dhici doono suuqa. dhamaadka bishan March.
2 Naqshadeynta Doogee S98
3 8-core processor
4 FullHD+ shaashadda
5 Qaybta sawirka
6 6.000 mAh batari
7 Taariikhda qiimaha iyo sii deynta
Goobta Kaydinta 256 GB USF 2.2 oo lagu fidin karo microSD
Screen 6.3 inji - FullHD + xallinta - LCD
kuwa kale NFC - Android 12 - 3 sano oo cusbooneysiin ah
Naqshadeynta Doogee S98
Boobka muhiimka ah ee tayada iyo nashqada ay bixiso Doogee S98 ayaa laga helayaa xagga dambe. Dhabarka S98 waxaa ku jira shaashad LCD ah. Waxaan habayn karnaa sawirka ka muuqda shaashadda si aan u aragno wakhtiga, maalinta, fariimaha, heerka batteriga, kontaroolada dib-u-ciyaarista muusiga.
Hadda, ma garanayno haddii, marka lagu daro, ay noo ogolaan doonto dib u eegi sawirka kamarada danbe. Waxay noqon doontaa doorasho cajiib ah oo naga caawin doonta inaan ka faa'iidaysano qaybta dambe ee ka kooban 3 kamaradood oo aan ka hadli doono dambe.
Doogee S98 waxaa ku jira shahaado IP68, IP69K iyo shahaado ciidan Mil-STD-810G, shahaado hubinaysa in uu si sax ah u shaqeeyo terminaalkan deegaan kasta, marka la eego isbeddelada degdega ah ee heerkulka iyo sidoo kale iska caabinta ficil ahaan dharbaaxo kasta.
Gudaha Doogee S98 waxaan ka helnaa processor-ka 8-core MediaTek, Helio G96. 8-daan nooc, 2 ka mid ah waa waxqabad sare, inta soo hartayna waxay mas'uul ka yihiin hagaajinta maareynta baytariyada, batterigu waa mid kale oo ka mid ah awoodaha terminalka.
Processor-ka waxa la socda 8 GB ee RAM nooca LDDR4X (waxqabad sare, xusuusta awood yar) iyo 256 GB oo kayd ah (nooca USF 2.2), kaydinta, sida inta badan terminaalka soo saaraha, waxaan ku ballaarin karnaa isticmaalka kaarka microSD.
Waad ku mahadsan tahay processor-kan, waan awoodi doonaa ku raaxayso ciyaaraha ugu baahida badan iyada oo aan dib-u-dhac lahayn iyo tan ugu muhiimsan, iyada oo aan la isticmaalin baytari badan oo aan ka hadli doono dambe.
Terminalkan cusub waxaa maamuli doona Android 12 iyo, sida uu sheegay soo saaraha, waxaad heli doontaa ugu badnaan 3 sano oo cusbooneysiin iyo cusbooneysiin amniga ah ee Android.
Waxaa ka mid ah a Qalabka NFC si ay maalin-to-maalin wax uga iibsadaan Google Pay, waxay haysataa shahaado milatari MIL-STD-810G iyo dareeraha sawirka faraha ee dhinaca.
Si aad ugu raaxaysato awoodda cajiibka ah ee MediaTek G96, waxaad u baahan tahay shaashad la mid ah midda uu bixiyo Doogee S98. Doogee S98 waxaa ku jira shaashad nooca LCD ah 6,3 inji oo leh 2.580 × 1080 xallin (FullHD +) iyo ilaalinta muraayadda Corning Gorilla.
Hadda ma garanayno waxa ay le'eg tahay muraayadda wareegta ah ee dhabarka, laakiin waxay leedahay dhammaan calaamadaha lagu qiyaaso inay yihiin ku dhawaad ​​1,5 inji, in ka badan meel ku filan oo lagu tashado macluumaadka aan rabno.
Dhanka hore, Doogee S98 waxaa ku jira a 16 MP kamarad, in ka badan xalin ku filan kuwa jecel selfie. Dhanka dambe, arrimuhu aad bay u xiiso badan yihiin, maadaama module ka kooban 3 lenses uu ku jiro:
La muraayada ugu weyn ayaa gaadhaysa 64 MP ee xallinta. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo ku jira muraayadda loogu talagalay in lagu sameeyo Aragtida habeenkii oo leh 20 MP ee xallinta. Qolka saddexaad waa a xagal ballaadhan oo leh xallinta 8 MP.
Intaa waxaa dheer, waxaa ka mid ah a Iftiinka LED Kaas oo u shaqeeya sidii toosh.
6.000 mAh batari
Batterigu wali waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee soo saaraha iyo Doogee S98 ma aha mid ka reeban. Gudaha terminaalkan, waxaan ka heleynaa a 6.000 mAh baytari oo taageero u ah 33W ku dallacaadda degdega ah.
Doogee ku dar dabaylahan sanduuqa, sidaas darteed lagama maarmaan ma noqon doonto in la sameeyo maalgashi dambe. Haddii aadan rabin inaad isticmaasho dhinaca degdegga ah, waxaad ku dallaci kartaa terminaalkan adigoo isticmaalaya dallacaadda wireless-ka, oo ku habboon awoodda ugu badan ee 15W.
Taariikhda qiimaha iyo sii deynta
Sidaan ku sheegay bilawgii maqaalkan, lama filayo in la soo bandhigo Doogee S98. ilaa dhamaadka bishan Maarso. Hadda, ma garanayno waxa uu noqon karo qiimaha suuqa.
Laakiin, ogaanshaha soo saaraha, waxaad u badan tahay inaad sameyso qaar ka mid ah dallacaad gaar ah taas oo noo ogolaanaysa in aan lacag badan kaydsanno. Laga soo bilaabo Androidsis waxaan isla markaaba kugu wargelin doonaa taariikhda la bilaabayo iyo soojeedinta labadaba.
Hadaad rabto inaad ogaato wax badan oo ku saabsan terminaalkan, waxaan kugu martiqaadayaa inaad booqato shabakada wararka xanta ah oo dhan lagu ururiyo. Waxaad sidoo kale booqan kartaa website-ka rasmiga ah wixii faahfaahin ah.
Hadaad qorsheysato cusboonaysii mobilkaaga toddobaadyada soo socda, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad eegto qiimaha furitaanka terminaalkan cusub, kaas oo leh 3 sano oo cusbooneysiin ah, wuxuu noqonayaa ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Wax kasta oo aan ilaa hadda ognahay oo ku saabsan Doogee S98
Roam SL waa nooca khafiifka ah ee Sonos hitkiisii ​​ugu dambeeyay
Realme GT 2 Pro sida sharad loogu talagalay kala duwanaanta sare [Falanqaynta]